Fandrarana plastika tokana, fako ara-tsakafo ary vokatra eto an-toerana no laharam-pahamehana ao amin'ny drafitra maharitra maharitra Centara's 2019
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Fandrarana plastika tokana, fako ara-tsakafo ary vokatra eto an-toerana no laharam-pahamehana ao amin'ny drafitra maharitra maharitra Centara's 2019
Centara Hotels & Resorts, Mpandraharaha fandraisam-bahiny malaza any Thailandy, dia mifantoka amin'ny laharam-pahamehana maharitra telo ao anatin'ny drafi-pandrosoana maharitra vao haingana natolotry ny orinasa 2019: manafoana ireo vokatra plastika tokana ampiasaina; fampihenana ny dian-tongotra fako; ary manitatra ny fanohanany ny fambolena eo an-toerana sy ny vondrom-piarahamonina mitombo vokatra.
Tsy misy vokatra plastika tokana ampiasaina amin'ny faran'ny 2019
Ny fanafoanana ireo zavatra plastika tokana ampiasaina dia ao anatin'ny programa "Centara Earth Care" izay natao hanentanana ireo vahiny sy mpizahatany ho mavitrika amin'ny famerenana angovo, ny fihenan'ny fako ary ny fizahan-tany maharitra momba ny tontolo iainana. Ny drafi-pandrosoana maharitra dia mandrakotra karazan'entana plastika tokana ampiasaina tokana, ao anatin'izany ny mololo fisotro, harona fanasan-damba, fitoeran-kanina entina misimisy, tobim-pahasalamana ary tavoahangy plastika amoron-drano ary kojakoja ilaina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Izy ireo dia soloina zavatra vita amin'ny fitaovana namboarina mba hampihena ny fiantraikan'ny tontolo iainana.
"Centara dia miezaka miasa ara-etika sy maharitra amin'ny fomba mifandanja manerana ny portfolio iray manontolo ary manome ambaratonga miavaka amin'ny fandraisam-bahiny Thai," hoy i Thirayuth Chirathivat, Lehiben'ny Executive Executive. “Manolo-tena hisafidy ireo vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izahay, izay mamela anay hampiditra bebe kokoa ny paikady maharitra sy ny fampandrosoana amin'ny vokatra sy serivisinay, ary hiteraka soatoavina iraisana amin'ny sehatra tontolo iainana, sosialy ary toekarena na aiza na aiza no iasanay. Izahay koa dia manolo-tena hiantoka tontolo feno fanajana, filaminana ary fahasalamana ho an'ny fiaraha-monina lehibe sy ny hoavintsika. ”
Centara dia nanomboka nifindra tamin'ny famongorana ireo vokatra plastika tokana tamin'ny taona 2018 manerana ny 39 amin'ireo fananana miasa ao aminy. Eo ambanin'ilay drafitra, ireo vokatra hafa azo ampiasaina ary namboarina tamin'ny fitaovana mora kokoa amin'ny tontolo iainana, anisan'izany ny plastika mifototra amin'ny zavamaniry, azo zezika ary azo ovaina, dia hafafa amin'ny faran'ny taona.
Dingana I, mikendry ny fanafoanana ny mololo plastika, nanomboka ny volana aogositra 2018. Ny mololo plastika tokana nesorina dia maharitra 200 taona vao simba; ireo straw-bio vaovao manolo azy ireo ho simba ao anatin'ny enim-bolana. Raha vantany vao vita tanteraka ny fanovana manerana ny fananana Centara, ny fihenan'ny fanjifana mololo plastika dia mitentina 2.2 tapitrisa isan-taona.
Dingana II, manala ny fampiasana kitapo fanasan-damba plastika, nanomboka ny volana desambra 2018. Raha mandroso, ireo fomba fanao ireo dia ho lasa fenitry ny Centara ihany koa ho an'ny fananana rehetra misy sy vaovao.
Fampihenana ny fako
Ny fandraisana andraikitra vaovao maharitra sy mitohy mifandraika amin'ny sakafo maharitra Centara dia misy:
mampihena bebe kokoa ny fako ara-tsakafo ary mampihena ny dian-tongotry ny karbaona tsirairay amin'ny fividianana sakafo vaovao avy any an-toerana avy amin'ny mpamboly zava-maniry, voankazo ary legioma.
fanaovana fanomezana mihoatra ny andro amin'ny sakafo be loatra ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa miorina akaikin'ny trano tsirairay
manome fambolena voajanahary voafaoka mialoha ho an'ny zezika ny toeram-piompiana eo an-toerana
manova ny fako amin'ny fananana voafantina ho lasa solika biogas, fifangaroan'ny entona methane sy gazy karbonika azo ampiasaina ho solon'ny solika fôsily.
Tamin'ny taona 2018, Centara dia nanohana ny Scholar Foundation of Sustarance (SOS Thailand), miorina amin'ny Bangkok amin'ny alàlan'ny fanomezana mandritra ny andro iray mihoatra ny 28,000 kilao (kg) sakafo ambim-bava. Ny fanomezana dia nanome servisy mihoatra ny 86,000 ho an'ireo mila fanampiana, raha ny fihenan'ny fako ara-tsakafo Centara kosa dia nitahiry mihoatra ny 54,000 kg ny famoahana mitovy amin'ny GHG.
Samy Centra by Centara Maris Resort Jomtien sy Centara Grand Beach Resort Phuket dia samy manana milina biogas eo an-toerana afaka mamadika fako biolojika 30-100 kg isan'andro ho isa mitovy litatra ny zezika voajanahary sy biogas azo oharina amin'ny dimy kg / andro Solika LPG. Nanomboka ny volana jolay 2018, ny milina famokarana Cowtec Composting & Biogas Production napetraka tao Centra avy amin'i Centara Maris Resort Jomtien dia nanodina fako biolojika avy tao an-dakozian'ny trano, canteens an'ny mpiasa ary ny asa fanaovan-tany. Tamin'ny faran'ny taona 2018, ny masinina dia nanangona fako mihoatra ny 5,700 kg ary namokatra 262 kg LPG mitovy amin'ny biogas.
Hamafiso ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana
Ny drafitr'asa maharitra maharitra Centara's 2019 dia manitatra ny fanohanan'ny orinasa ireo toeram-piompiana sy mpamokatra kelin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana izay mamboly sakafo ho an'ny hotely Centara sy hotely any amin'ny faritra misy azy ireo.
Ny orinasa dia manasongadina ny fihenan'ny dian-tongan'ny karbonina amin'ny fanaovana sahabo ho 70% ny fividianana vokatra avy amin'ny loharanom-baovao eo an-toerana. Ankoatry ny tombony ara-toekarena ho an'ny fiarahamonina, ny fanitarana ny fisakafoanana an-tsena an-databatra dia ahafahan'ny fananana manome ny sakafon-tsakafo farany azo omena ho an'ny vahiny.
Ny fifandraisan'ny orinasa amin'ny EarthCheck, ny benchmarking, ny fanamarinana ary ny vondrona mpanolotsaina manerantany momba ny dia sy fizahan-tany dia mitohy manatsara ny mari-pahaizana maharitra. Hatreto dia trano fandraisam-bahiny 15 sy trano fandraisam-bahiny Centara no nahavita fanamarinana EarthCheck ary fananana efatra hafa voasoratra ao amin'ny programa Evaluate Plus an'ny EarthCheck, izay mitarika fihenam-bidy lehibe amin'ny dian-tongotry ny karbonina sy ny famoahana entona entona avy amin'ny fananana marobe Centara.
Vao tsy ela akory izay, ny fitarihan'ny orinasa ny fitohizan'ny tontolo iainana dia neken'ny Stock Exchange of Thailand, izay nanome ny Centara Hotels & Resorts (CENTEL) ny anarana hoe "Thailand Sustainability Investment (THSI)", fankatoavana isan-taona an'ireo orinasa voatanisa izay miandraikitra ny tontolo iainana. , Lafiny sosialy sy fitantanana (ESG).
Ny fankatoavana bebe kokoa ny fananana dia misy ny “Green Hotel 2018 Award” avy amin'ny Departemantan'ny fampiroboroboana ny kalitaon'ny tontolo iainana ao amin'ny Ministeran'ny Harena voajanahary sy ny tontolo iainana any Thailandy, nomena an'i Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin ary Centra avy amin'i Centara Maris Resort Jomtien.
Centara Hotels & Resorts no mpiasan'ny hotely lehibe ao Thailand. Ny fananany 68 dia manerana ny toerana itrangan'ny Thai rehetra miampy ny Maldives, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Sina, Oman, Qatar ary ny Emirà Arabo Mitambatra. Ny portfolio-n'i Centara dia misy marika enina - Centara Grand Hotels & Resorts, Centara Hotels & Resorts, Centara Boutique Collection, Centra by Centara, Centara Residences & Suites ary COSI Hotels - miainga amin'ny hotely misy kintana 5 sy fialan-tsasatry ny nosy mankamin'ny trano fandraisam-bahiny sy fomba fiainana mora vidy Hevitra tohanan'ny teknolojia vaovao, miasa ihany koa ny ivon-toeran'ny fivoriambe manara-penitra ary manana ny marika spa nahazoany loka, Cenvaree. Nandritra ny famoriam-bola dia nanolotra sy nankalaza ny fandraisana vahiny i Centara ary manome lanja ny Thailandy noho ny fanolorana asa fanompoana mahafinaritra, sakafo miavaka, spaoro manala baraka ary ny maha-zava-dehibe ny fianakaviana. Ny kolontsaina mampiavaka an'i Centara sy ny fahasamihafan'ny endriny dia mamela azy io hanompo sy hanomezana fahafaham-po ireo mpandeha saika amin'ny taona sy ny fomba fiainana.
Nandritra ny dimy taona manaraka dia mikendry ny hampiakatra avo roa heny ny habeny i Centara amin'ny fananana fanampiny any Thailandy sy ny tsena iraisam-pirenena vaovao, sady manaparitaka ny dian-tongony any amin'ny kaontinanta vaovao sy ny tranombarotra amin'ny tsena. Rehefa manitatra hatrany i Centara, ny mpanjifa tsy mivadika mitombo dia hahita ny fomba fandraisam-bahiny tokana an'ny orinasa amin'ny toerana maro. Ny programa tsy fivadihan'i Centara manerantany, Centara The1, dia manamafy ny tsy fivadihan'izy ireo amin'ny valisoa, tombontsoa ary ny vidin'ny mpikambana manokana.
Fantaro bebe kokoa momba ny Centara ao amin'ny www.centraHotelsResorts.com